आजदेखि देशभर लकडाउन ब्यापक कडा – अब पास भएका सबारी पनि चलाउन नपाइने !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/आजदेखि देशभर लकडाउन ब्यापक कडा – अब पास भएका सबारी पनि चलाउन नपाइने !!!
काठमाडौं- नेपालगन्जमा एकैदिन १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्र-मण देखिएपछि देश`भरको लक`डाउन कडा पारिएको छ । क्षेत्र छुट्या`एर जोखिम कम भएका स्थानमा लक डाउन खु`कुलो पार्ने तयारी भैरहेका बेला चुनौती थपिएपछि झन् क.डा पार्ने तयारी गरिएको हो ।
नेपालगञ्ज र पर्सामा आइतबार मात्र १६ जना संक्र`मित भेटिए पछि थप जोखिम नब`ढोस् भनेर लक`डाउन कडाइ गरिएको हो । लकडाउन केही खु`कुलो हुने अनुमा`न गरिए पनि नेपालग`न्जमा १५ जनामा संक्र`मण देखिए पछि चुनौती बढेको भन्दै थप कडाइ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तराई क्षेत्रबाट रातारात हुलका हुल मान्छे काठमाडौं आएको भन्दै काठमाडौंको लक-डाउन पनि थप कडा पारिएको छ । सीमाबाट हुनसक्ने घुस`पै`ठमा कडाइ गर्ने । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेशमा कडाइ गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा पनि लकडा`उनमा कडाइ गरिएको महा`नगरीय प्रहरी कार्यालय रानी-पोखरीका डीआईजी विश्व`राज पोखरेलले बताए । उनले काठमाडौं भित्रिने नाकामा समेत उ`च्च निग`रानी राखिएको जानकारी दिए ।डी.आई.जी. पोखरेलले भने, “तुलना`त्मक हिसाबले काठमाडौं सुरक्षित देखिएको छ ।
अब यहाँ भित्रिने नाका बिरामी र अत्या`वश्यक कुराको यकिन गरेर मात्रै प्रवेश गर्न दिन्छौं । पासको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन पनि यकिन गर्छौं ।”पो`खरेलका अनुसार अब पास लिएका पनि धेरैजसो स`वारीसाधन चलाउन नदिने तयारी भैरहेको छ । पहुँच`का आधारमा धेरैले पास लिएर दुरुपयोग गरेको समेत भेटिएको छ ।